हामी काेही पनि कम्युनिष्ट हाेइनाैँ « Jana Aastha News Online
प्रकाशित मिति : ५ मंसिर २०७८, आईतवार २१:३०
मानुषी यमी भट्टराई, डा.बाबुराम–हिसिलाकी छोरी
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रश्न गरेका थिए, भूमिगत हुँदा बाबुराम कसरी लण्डन गए ? त्यहाँ छोराछोरी पढाउने पैसा कहाँबाट ल्याए ? उक्त प्रश्न गरिएकी पात्र बाबुरामपुत्री मानुषी यमी भट्टराईले तत्काल यसको खण्डन गरिन्, पढ्नलाई बेलायत गएको हैन भनेर । हामीले उनै मानुषीलाई भेट्टायौँ, झोला बोकेर लुखुरलुखुर हिँडिरहँदा ।
जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको भूमिकामा छिन् उनी । पार्टीको बाग्मती प्रदेशको सचिव पनि । गत भदौदेखि संगठन सृदृढीकरण अभियानअन्तर्गत काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र ७ को संयोजन गरिरहेकी छन् । ०६५ सालमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनकी सचिव, कार्यवाहक सभापति हुँदा विश्वविद्यालय सुधारका लागि धेरै यत्न गर्ने विद्यार्थी नेत्री हुन् उनी । माओवादी जिल्ला सदस्य तथा अखिल क्रान्तिकारी सचिवालय सदस्यको रूपमा समेत काम गरिसकेकी उनी जेकेन्द्र श्रेष्ठसँग वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएकी छन् । उनकै छिमलका विद्यार्थी राजनीति गरेकाहरू प्राडो र पजेरोमा हुइँकिएर महँगो जीवनशैली बाँचिरहँदा यमी प्राध्यापनबाट जीविकोपार्जन गरिरहेकी छन् ।
विद्यार्थी आन्दोलन किन मुर्झायो ?
– अहिले राजनीतिक दल शक्तिशाली छन् । राज्यभन्दा पनि शक्तिशाली हुने अवस्थामा छन् । जतिबेला दलहरू खुलेर सडकमा पुग्न सक्दैन थिए, त्यो कालखण्डमा प्रत्येक आन्दोलन विद्यार्थीले लड्नुपथ्र्यो । अहिले दल आफँै, युवा, किसानलगायत विभिन्न जनसंगठन सडकमा आउँछन् । त्यसैले विद्यार्थी संगठनको राप र ताप पहिलाजस्तो नदेखिएको हो । तर, अहिलेका आन्दोलन पनि चलाउनेचाहिँ विद्यार्थीहरूले नै हो । मूल्यवृद्धि विरुद्ध विद्यार्थी बोल्दै आएका छन् । यद्यपि, प्रभाव पहिलाजस्तो रहेन । विद्यार्थी आन्दोलन सम्झौतापरस्त हुँदै गए । माउ पार्टी सत्तामा हुँदा र नहुँदा फरक चरित्र देखाउने भएका कारण विद्यार्थी आन्दोलन प्रभावकारी नभएको जस्तो देखिन्छ ।
कुनै समय विद्यार्थी आन्दोलनको लिडर तपाईं । कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ विद्यार्थी आन्दोलन ?
– मूलतः राजनीतिक, वैचारिक सम्बन्ध हुन सक्छ । अलि बढी स्वयतता हुनुपर्छ । विद्यार्थी संगठन भनेको सदैव प्रतिपक्षी रहनुपर्ने छ । पार्टीभित्र गलत प्रवृत्ति हाबी भएको खण्डमा आवाज उठाउने, विद्रोह गर्ने खालको हुनुपर्ने हो । अहिले आफ्नो राजनीतिक दलले जे बोले त्यही सुगा रटाइ गर्ने खालको बन्यो । सांगठनिक, विधान र व्यवहार साथैं कार्यान्वयनमा पनि स्वायत्त र स्वतन्त्र हुनुपर्छ माउ पार्टीभन्दा । नेतृत्व पुरानै हुनुहुन्छ, आमरूपमा आमविद्यार्थीको नेतृत्व गर्न सकेजस्तो लाग्दैन ।
माओवादीले जुन शिक्षा प्रणालीलाई बुर्जुवा भन्यो । त्यही शिक्षा प्रणालीमा लिनुभयो । समग्रमा नेपालको शिक्षा प्रणाली कस्तो पाउनुभयो ? कसरी सुधार्ने ?
– दुई वर्ष भए पनि बेलायतमा पढ्दा, भारतका विभिन्न ठाउँका प्रायः सरकारी शैक्षिक संस्थामा पढ्दा र नेपालको हेर्दा हाम्रो शैक्षिक प्रणाली उदेकलाग्दो छ । देशलाई आर्थिक रूपमा विकास गर्ने हो समृद्धिको दिशामा लैजाने हो भने सबैभन्दा पहिला हाम्रो शैक्षिक संस्था सुधार्न र पूर्ण रूपमा रूपान्तरण नगरेसम्म असम्भव देख्छु । हाम्रो शैक्षिक प्रणाली रट्नेमा मात्र केन्द्रित भयो । हाम्रो पढाउने स्टाइललाई विविधिकरण गर्न सकेका छैनौं । म आफैं विद्यार्थी आन्दोलनबाट आएको, एउटा राजनीतिक आन्दोलनबाट आएको र अध्ययनमा एकदमै रुचि राख्ने व्यक्ति भएका कारण शैक्षिक संस्था रूपान्तरण मेरो पहिलो प्रथामिकतामा पर्छ ।
विद्यार्थी राजनीतिले हाम्रा विश्वविद्यालय ध्वस्त पारे भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । मान्नुहुन्छ ?
– एकतर्फी भाष्य बन्यो नेपालमा । त्यति मात्र भनेर हामी उम्कन पाउँदैनौँ । मुख्य गल्ती त राज्यकै हो सरकारी शैक्षिक संस्था ध्वस्त बनाउनुमा । भीसी, पदाधिकारी, क्याम्पस चिफ, प्राध्यापक, डिर्पाटमेन्ट हेड, सेवा आयोगमा नाम निकाल्ने, सरुवा वा बढुवा सबै कुरामा राजनीति हस्तक्षेप छ । स्ववियु निर्वाचन नभएको यतिका वर्ष भयो, शैक्षिक संस्थामा केही सुधार आएको छ र ? यसैबाट थाहा हुन्छ, मुख्य बाधक स्ववियु, विद्यार्थी होइनन् । अपावद बाहेकका केही डिपार्टमेन्टमा प्राध्यापकका पहलका कारण केही सुधार आएको छ तर परीक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रमका केही रूपान्तरण आएको छैन । अहिले पनि टियुको दुई वर्षे कोर्स तीन वर्ष वा चार वर्ष नभई सर्टिफिकेट पाइँदैन । यसमा त स्ववियु बाधक छैनन् ।
तपाईंकै छिमलका विद्यार्थी राजनीति गर्नेहरू कोही प्राडो, पजेरो चढ्ने भए । कोहीले त्यही राजनीतिको आडमा काठमाडौंमा महल ठड्याए । तपार्इं आफ्नो खाइजीविकाका लागि अहिले पनि प्राध्यापन गर्दै हुनुहुन्छ । विद्यार्थी राजनीतिलाई धेरैले कमाइखाने भाँडो बनाएका कारण यो बदनाम भयो भन्छन् । स्विकार्नुहुन्छ ?
– म स्ववियुमा आउनुअघि एकदमै अपारदर्शी थियो । टियुमा पैसा खान गाह्रो काम रहेनछ भन्ने थाहा पाइयो । मेरो बाबा, आमाको पहिचानका कारण कसैले मेराअगाडि आँट गरेनन् । केन्द्रीय क्याम्पसमा हामी गएपछि पहिलो पटक फि घटाइएको थियो । आज राम्रो मान्छे आउला, भोलि नराम्रो मान्छे आउला त्यही कारण सिष्टम बलियो बनाउनुपर्छ । अर्काेचाहिँ जनस्तरबाट दण्ड र सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारीलाई पुरस्कृत, भ्रष्टाचार नगर्ने तिरस्कृत हुनेक्रम बढ्दो छ । जुनसुकै तरिकाले होस पैसा कमाउने मान्छे नै शक्तिशाली हुने परिपाटी निर्माण भइरहेको छ । यो परिपाटी रहेसम्म असल नियतले राजनीतिमा आउनेहरू तिरस्कृत हुनुपर्ने स्थिति छ ।
१७ महिनाअघि तपार्इंको बेबी बम्पले बजार पिट्यो । गर्भको पेट प्रदर्शन गर्नुपर्ने त्यस्तो बाध्यता कि के आइलाग्यो ?
– धेरै चर्चाको विषय बनाउनुपर्ने आवश्यक थिएन । हामी आधुनिक युगमा बाँचिरहेका छौं भन्छौं, आफूलाई । आफ्नो सन्तान पेटमा हुँदा खुसी हुने, उत्सव बनाउनु स्वाभाविकै हो । यस्तो विषयलाई समाजले हस्तक्षेप गर्ने, मर्यादासँग जोड्ने । महिला भूमिका सदैव परम्परागत हुनुपर्छ भन्ने कुरा अहिलेको पुस्ताले पचाउँदैन । अग्रगामी सोच राख्ने र पश्चगामी सोच बोक्नेहरूबीचको द्वन्द्व देखिएको मात्र हो । माओवादी आन्दोलनबाट आउनुभएको एक जना साथीले प्रियंका कार्कीको बेबी बम्पलाई अभद्र भन्नुभयो । जबकि मेरो बाबाले प्रियंकाको सपोर्टमा ट्विट गर्नुभएको थियो । काउण्टरमा उनले मेरा बाबालाई सक्नुहुन्छ भने आफ्नो छोरीलाई पनि बेबी बम्ब गर्न लगाउनू भन्नुभयो । यस्तो कुरामा तथाकथित कम्युनिष्ट, वामपन्थीहरू रुढीवादी हुनुहुन्न । वामपन्थीहरू प्रगतिशील हुनुपर्नेमा उहाँहरूमै रुढीबादी चेतना देखिएपछि मैले प्रदर्शन गरेको हो ।
केपी ओलीले केही साताअघि तपाईंले बेलायतमा अध्ययन गर्नुभएको प्रसंग निकाल्नुभएको थियो । उहाँको आरोपमा कत्तिको सत्यता छ ?
– एउटा जिम्मेवार दलको अध्यक्ष, पूर्वप्रधानमन्त्रीको मुखबाट यस्तो झुटो कुरा आउनु चिन्ताजनक विषय हो । मैले खण्डन पनि गरिसकेँ । कोही नेताले यस्ता विषयलाई सनसनीपूर्ण बनाउने, ताली पड्काउने कुरा मात्र बनाउनेभन्दा पनि नेताहरूको जीवनशैली आर्थिक सोचबारे राम्रै सोच र बहस हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । समग्र रूपमा हाम्रो राजनीतिक दलका नेताको सन्तान कसरी जीवनयापन गरिरहेका छन् ? आमजनताको चासो हुनु राम्रो हो । ०४९ सालमा आमा स्कलरसिपमा छनोट हुनुभयो । म एक्ली छोरी, बुबाले हेर्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यो बेला एम्बेसीले पुरुषले स्कलरसिप पाउँदा परिवार लिएर जान पाउँथ्यो तर मेरो ममीले स्कलरसिप पाउँदा परिवार लैजान दिएन । ममीले ठूलो संघर्ष गर्नुप¥यो । छोरीलाई लान दिनुहुन्न भने म पनि जान्नँ भन्ने ममीको अड्डीपछि एम्बेसी गल्यो । मैले तीन–चार कक्षाचाहिँ बेलायतमा पढेको हुँ । ०५१ सालमा त हामी नेपाल फर्कियौं ।
पछिल्लो समय पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको टार्गेट बाबुराम भट्टराई वा प्रचण्डप्रति बढी देखिन्छ । किन होला ?
– माओवादी आन्दोलनबाट आज गणतन्त्र, संघीयता, समावेशितालगायत उपलब्धि हामीले गरेका छौं । यी उपलब्धिसँग जोडिने पात्र हुन् माओवादी आन्दोलनका अगुवा प्रचण्ड र बाबुराम । गत वर्षदेखिको ओली सरकारको गतिविधि, काण्ड, नेकपा गठन हुँदादेखि नै बाबुराम भट्टराईले त्यो ठीक छैन । ओली प्रवृत्ति भनेको भष्मासुर प्रवृत्ति भन्दै आउनुभएको थियो । प्रचण्ड माधव नेपाल चुप रहँदा पनि निरन्तर खबरदारी गरिरहने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो बाबुराम भट्टराई । त्यसैले गर्दा बाबुराम भट्टराईलाई तारो बनाउनुभएको हो कि जस्तो लाग्छ ।
तपार्इंको शिक्षा स्थिर भएन । बेलायत, भारत हुँदै नेपालका शिक्षालयबाट भयो । अध्ययनका क्रममा कतिको दुःख भुक्तमान गर्नुप¥यो ?
– कति अपांग छन् । कतिपय गोलीका छर्रा बोकेर हिँड्नुभएको छ । शहीद, बेपत्ताका परिवारका अगाडि मैले दुःख पाएँ भन्न त पटक्कै सुहाउँदैन । बा आमाबाट १० वर्षको उमेरदेखि अलग रहेर हिँडे । धेरैजसो सीमापारिका नेपाली कामदार, मजदुरी गर्नेहरूले राख्नुभयो । सुरक्षाको थ्रेट त हुन्थ्यो । बा आमासँग टाढा रहनुपर्ने र आफ्नो परिचय लुकाउनुपर्ने स्थितिथ्यो । बाँचे र सँगसँगै अध्ययन गर्न पाए । नर्सरीदेखी केजीसम्म काठमाडौंकै स्वर्णिम स्कुल, नवज्योति स्कुलबाट १ र २ र बेलायतको हट्सपर स्कुल र न्युक्यासलस्थित क्राइस्ट चर्च स्कुलबाट कक्षा ३ र ४, ५ काठमाडौंमै त्यसपछि कक्षा ६ र ७ भारतको नैनीतालको सेन्ट जोन्स् स्कुल । ८ देखि १० सम्म दार्जिलिङ पेदोङस्थित सेन्ट जर्जेज् स्कुल । १० कक्षापछि पार्टीको औपचारिक सदस्यता लिएर प्रवास कमिटीमा काम गर्न थालेको हुँ । ११ र १२ को पढाइचाहिँ नयाँदिल्लीस्थित नवयुग स्कुल, दिल्ली विश्वविद्यालयअन्तर्गतको लेडी श्रीराम कलेजबाट स्नातक तह र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्र र इतिहास विषयमा स्नातकोत्तर पूरा गरेको हुँ । सन् २०१६ मा दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट राजनीतिक अध्ययन विषयमा एमफिल पूरा । सापेक्षिक रूपमा मेरो दुःखलाई दुःख भन्न मिल्दैन । मैले जे–जति सुविधा र अवसर पाएँ, राजनीतिमा म जति समय सक्रिय हुन्छु त्यो अवधिभर आफ्ना साथीहरूको बलिदानी बिर्सनुहुन्न, शिक्षाप्रति घमण्ड गर्नुहुन्न । अवसर पाएको सुविधा अरुले कसरी लिन सक्छन् भन्ने सदैव बोध हुन्छ ।
नयाँ विद्यार्थी र युवालाई राजनीतिमा तान्न के–कस्ता कार्यक्रम छन्, तपाईंहरूसँग ?
– म अहिले विद्यार्थी संगठनभन्दा भूगोल संगठनमा सक्रिय छ । स्थानीयस्तरका जनतालाई कहाँ समस्या वा मर्का परेको छ त्यसैमा केन्द्रित छौं । तपार्इंहरूको समस्या पर्दा हामी साथैमा छौं भन्ने आभाष दिलाउने ढंगले काम गरिरहेका छौं ।
तपाईंको बुवाले वाम आन्दोलनलाई उत्कर्षमा पु¥याउनुभयो । माओवादी छाडेर, नयाँ शक्ति हुँदै अहिले जनता समाजवादी पार्टी निर्माण गर्नुभएको छ । वाम आन्दोलनबाट उहाँले अहिले अर्कै धार पकड्नुभएको छ । कतिपयले बाबुरामलाई राजनीतिमा अस्थिर खेलाडी भन्छन् । कसरी लिनुहुन्छ ?
– संसारमा केही चिज स्थायी छ भने परिवर्तन मात्र हो । विज्ञान, समाजको नियम त्यही हो । कतिपयले बाबा जता लाग्यो छोरी उतै लाग्यो भन्छन् । बाबाले नयाँ शक्ति शुरु गर्नुअगावै माओवादीमा देखिएको दुई लाइन संघर्ष अस्वस्थ ढंगले अगाडि बढेको थियो । माओवादी पार्टीबाट अलि टाढा भइसकेको थिएँ म आफैं पनि । बाले नयाँ शक्ति अभियान घोषणा गरेपछि म पनि उत्साहित भएको हुँ ।
म सचेत राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थी । क्षितिजपारि अरूले देख्न नसकेको कुरा बाबुराम भट्टराईले देख्नुहुन्छ । संविधान संशोधनको ‘स’सुन्न नचाहने मान्छेहरू अहिले संविधान संशोधनको लाइनमा आएका छन् । मधेस, थारूको मुद्दालाई अपराधीकरण गर्नेहरू अहिले ती मुद्दा जायज रहेछन्, सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने ठाउँमा आपइपुगेका छन् । ओली प्रवृत्ति भष्मासुर प्रवृत्ति हो भनेर उहाँले पहिल्यैदेखि भन्नुभएको हो । अहिले केही महिनादेखि सबै ओलीका भष्मासुर प्रवृत्तिकै चर्चा गर्दै छन् । उहाँले धेरै पहिल्यै समाजवादी धारको चर्चा गर्न थाल्नुभएको हो । अहिले माधव नेपालहरू त्यहीँ आइपुग्नुभएको छ । कालान्तरमा बुवाले भनेकै लाइनमा आइपुग्दा रहेछन् ।
तपाईंले लामो समय कम्युनिष्ट राजनीति गर्नुभयो । अहिले जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको भूमिकामा हुनुहुन्छ । तपार्इं अब कम्युनिष्ट रहनुभयो कि भएन ?
– कम्युनिष्ट त हामी कोही पनि छैनौं । जसले आफूलाई कम्युनिष्ट पार्टीका भन्छौं, कम्युनिष्ट बन्ने लक्ष्य राखेका मात्र हौं । नेपालको सन्दर्भमा कम्युनिष्ट एकदमै विकृत भएको ब्राण्ड । कम्युनिष्टहरू आफूलाई कम्युनिष्ट भन्न लजाउनुपर्ने स्थिति छ । जतिसुकै कुहिए पनि जतिसुकै गन्हाए पनि त्यो कम्युनिष्ट भन्ने ब्राण्डलाई बोकिराख्छु भनेर म सक्दिनँ । म माक्र्सवादी पद्धति मान्ने व्यक्ति हुँ । ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकको सहयोग लिन्छु आज पनि राजनीतिमा । यद्यपि, त्यो दशकौंअघि विकास भएको हो त्यसलाई हुबहु नेपालमा लागू गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
नेपालको कम्युनिष्ट धार किन भुत्ते भयो । वाम एकता किन टिक्दैन ?
– वामपन्थीको मुख्य सिद्धान्त कसरी बन्यो ? त्यसलाई नेपालको सन्दर्भमा जसरी ढाल्न खोज्यौं त्यसमा केही खोट देख्छु । विशुद्ध प्रयोगात्मक हिसाबले मात्र लिइयो । दोस्रो, एकदमै केन्द्रिकृत भयो कम्युनिष्ट पार्टी । त्यही कारण एकता धेरै नटिक्ने फुटिहाल्ने । नेताहरूमा इगो बोकिराख्ने परिपाटी भयो । नेतृत्व कहिल्यै हस्तान्तरण नहुने, आजीवन बसिरहनुपर्ने यसले गर्दा कम्युनिष्ट पार्टी धेरै टिक्छ भन्ने लाग्दैन ।
पार्टी, संगठनबाहेक अरू के गर्नुहुन्छ ?
– थेम कलेजमा पढाइरहेकी छु ।